AMK Creation » မိတ်ဆက်နိဒါန်း
In: AMK Creation
AMK Creation ဆိုသည့် ဤBlogလေးကို အိမ်သူ မြသွေးနီ နှင့်တကွ မိတ်ဆွေများ၏ တိုက်တွန်းမှုဖြင့် မရဲတရဲ စတင် မွေးဖွားဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါပြီ။ မရဲတရဲဟု သုံးနှုန်းရခြင်းမှာ ကျွန်တော်သည် အင်တာနက် အသုံးပြုဖို့ရာ အခြေအနေ ပါးလျသူတစ်ဦး ဖြစ်နေသလို၊ အွန်လိုင်းစာပေများကို ကိုယ်တိုင် တစိုက်မတ်မတ် ဖတ်ရှုနိုင်မှု မရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်အိမ်သူက အွန်လိုင်းမှာ စာများ ရေးသားနေသူ ဖြစ်နေပြန်သဖြင့်၎င်း၊ နှစ်ဦးစလုံး စာပေမြတ်နိုးသူများဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ အပြန်အလှန် ဖတ်ရသည်များ ဖလှယ်မျှဝေရာမှ အွန်လိုင်းမှ ကောင်းနိုးရာရာ စာများကို ရေးသားသူ ဘလော့ဂါများကို အမည်နှင့်တကွ ရင်းနှီးနေခဲ့မိ၏။ သူမကတဆင့် ဘလော့ဂါတချို့နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့ပြီး၊ အွန်လိုင်း စာရေးသူများအကြား ကြီးမားသည့် ခင်မင်မှုများကိုလည်း ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံယုံမျှမက ကြားသိခဲ့ရပါသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စာရေးရန် ၀က်ဘ်ဆိုက် နာမည် ရွေးချယ်သည့်အခါ ကျွန်တော်၏ မူလအလုပ်ဖြစ်သည့် AMK Creationနာမည်ကိုပဲ အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သည်။ AMK Creationသည် သားဖြစ်သူ အံ့မော်ကွန်း (သားပြည့်)၏အမည် ထိပ်စာလုံးများကို ယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအ၀၀၊ CD, VCD, DVD ရိုက်ကုး၊ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် အတူ အဓိက ၀ါသနာကို အခြေခံသည့် စာမူကြမ်းမှ စာအုပ်ချော ဖြစ်သည့်အထိ အလှပဆုံး၊ အသပ်ရပ်ဆုံး ၀တ္တုစာအုပ်လေးများ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီး၍ စီစဉ်ပေးရခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်နေပါသည်။
ဤတစ်နိုင်အလုပ်လေးကို လုပ်နေရင်းမှ မိမိကိုယ်တိုင် စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် အလျှောက် ရံဖန်ရံခါ စိတ်ထဲ မထွေးမအံနိုင်သည်များကို စာလုံးများအဖြင့် ချရေးမိတတ်ပြီး ကံအားလျှော်စွာ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာ အချို့တွင် ပါဝင်ခွင့် ရခဲ့ပါသည်။
ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ကျွန်တော်၏ လက်ချိုးရေတွက်လျှင်ပင် ရနိုင်သည့် စာမူများကို ဖော်ပြရင်း သိမ်းဆည်းချင်မိပါသည်။ ထို့အတူ ကျွန်တော် ဖန်တီးခဲ့သည့် စာပေ အနုပညာလက်ရာများကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဖော်ပြသွားချင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ လက်တွဲဖော် မြသွေးနီ၏ အဓိက အားပေးမှုနှင့်အတူ ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးကို ကြိုးစား၍ ရှင်သန် ပုံဖော်သွားခွင့် ပေးစေချင်ပါသည်။
ယခုအခါ အွန်လိုင်းမှ စာများကို ဖတ်နိုင်ရန်အတွက် အချိန်သတ်မှတ်ရန် ကြိုးစားနေပြီး၊ အွန်လိုင်းမှ ဘလော့ဂါများ၏လင့်ခ်များကိုလည်း တဖြည်းဖြည်း ချိတ်သွားပါမည်။ လိုအပ်သည်များကို ချစ်ခင် ရင်းနှီးစွာဖြင့် အကြံပေးနိုင်ပါသည်။
စာဖတ်သူ၊ စာရေးသူတိုင်းကို ရင်မှ အစဉ်လေးစားလျှက်..
အားပေးနေပါတယ် ကိုမော်ကြီး။ ဆရာမမြသွေးနီရဲ့ အိမ်ဦးသခင်မှန်းသိဘူး။
လာတာတောင်တော်တော်နောက်ကျနေပြီ။ ခုလင့်ချိတ်ထားလို့ လျှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီpostလေးမြင်မှသိတာ။
အဲဒီတုန်းက အင်တာနက်ရှိဘူး။ ( ဆင်ခြေ )
အတော်ဘဲပေါ့ ၊ ဆရာမက စာရေး ၊ ကိုမော်ကြီးက ဒီဇိုင်းလုပ် စာအုပ်ထုတ်။ အဆင်ကိုပြေလို့။ လိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲပေါ့။
AMK Creation အောင်မြင်ပြီး ထာဝရ တည်တံ့ ခိုင်မြဲပါစေ။
AH June 14th, 2012 (#)
လင့် ယူသွားပြီ ခင်ဗျာ… စာတွေဖတ်ဖို့ မျှော်နေမယ် အကိုရေ..
ဝေ June 14th, 2012 (#)
ရွှေအမြုတေဖတ်ညွှန်းမှာ အသေအချာညွှန်းထားတဲ့ ရတီက ၀တ္ထုလေးကို အားပေးဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်ရှင်…
စန်းထွန်း June 14th, 2012 (#)
မင်္ဂလာပါ..ဒီဇိုင်းလေးကို အတော်သဘောကျတယ်..ပို့ စ်အသစ်တွေ စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျား…
မေမြို့မိုး June 14th, 2012 (#)
blogger လောကမှာတော့ အစ်ကိုကြီးက ဂျူနီယာကျတယ်နော်.. ။း)
အစ်မမြသွေးနီ ရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်ဆိုတော့ အရေးအသားက ပြောစရာမလိုအောင်ပြောင်မြောက်တယ်ဗျာ.။ လေးစားပါတယ်အစ်ကိုကြီး.။ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကိုလည်းလာလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်.။
သတိုး June 13th, 2012 (#)
ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ..။း)
လည်စရာ၊ မွှေစရာ ၊ ဖတ်မှတ်စရာ အိမ်တစ်အိမ် တိုးတယ်လို့ မှတ်ပါတယ်။
kokosein June 13th, 2012 (#)
စာကောင်းပေကောင်းတွေ ဖတ်ရအုံးမှာမို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်
မောင်ဘကြိုင် June 13th, 2012 (#)
လည်စရာအိမ်တစ်အိမ်တိုးလာပြီး)း)
ကြိုဆိုကြောင်း လာနှုတ်ဆက်တာပါခင်ဗျား)း)
စံပယ်ချို June 13th, 2012 (#)
လင့်လေးလဲ ချိပ်ထားလိုက်ပါ့မယ် အမမြသွေးဆီဖတ်ရင်းသိခဲ့ရလို့ချက်ချင်းလိုက်တာပါ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) June 13th, 2012 (#)
လူမှုရေးတွေမှာ တက်ညီလက်ညီ တွေ့ရသလို စာပေနယ်မှာလည်း တက်ညီလက်ညီ
အခု အွန်လိုင်းပေါ်မှာပါ တက်ညီလက်ညီ မြင်ရတော့မှာမို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ပန်းချီ June 13th, 2012 (#)
ဘလော့ဂါအစ်ကိုတစ်ယောက်တိုးလာတာ အားရှိစရာပါအစ်ကို။ ညီမလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘုရားစူးဘလော့ဂါရယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် စာရေးသိပ်ကျဲပါတယ်။ အစ်ကို့ဆိုက်ဒ်ရဲ့ နာမည်နဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ တကယ်ချစ်စရာပါ။ သားပြည့်ကိုအတော်ချစ်ပုံရတယ် 🙂
AMK Creation June 13th, 2012 (#)
Yan June 13th, 2012 (#)
ကိုညိုရင့် (သို့မဟုတ်) ကိုမော်ကြီး…
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ.. အခုလိုမျိုး အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ရတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိတယ်.
ကိုမော်ကြီးရဲ့ စာပေလက်ရာတွေကို ဆက်လက်ဝေမျှပေးနိုင်ပါစေ..
ဘုန်း June 13th, 2012 (#)
AMK ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့် လိုက်ဖက်စွာ.. WEB ကို လှပစွာ သေချာဖန်ထီးထားမှုက လည်ပတ်သူများအား စိတ်ကြည်နှုးမှုရစေပါသည်။
ရွှေပြည်သူ June 13th, 2012 (#)
မင်္ဂလာပါ အစ်ကို။ ဘလော့ကောင်း နောက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပြန်ပြီလို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ အစ်မ မြသွေးနီကို အားပေးသလိုပဲ အားပေးမှာပါ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် June 13th, 2012 (#)
အိမ်လေးတစ်အိမ်တိုးလားလို့ အထူးပဲ ၀မ်းမြောက်မိပါသည်။
ချစ်ကြည်အေး June 13th, 2012 (#)
ဒီနေရာလေးမှာ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ စာပေနယ်-စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပျော်သလို မချစ်တို့ အွန်လိုင်း-ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း ပျော်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မချစ်တို့ ဘလော့ဂ်မိသားစုက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်း))
သက်ဝေ June 13th, 2012 (#)
Warmly welcome to our Blogosphere…
မောင်မျိုး June 13th, 2012 (#)
Welcome to သောင်းပြောင်းထွေးလာ ဘလော့ကမ္ဘာ 😛
မိုးခါး June 13th, 2012 (#)
မင်္ဂလာပါရှင် .. ဘလော့ဂါအကိုကြီးတယောက်တိုးတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ် .. ဘလော့ဂါတွေထဲက လုံးချင်းထုတ်ချင်ရင်လဲ လျှော့ဈေးပေါ့နော့် 😀 (လုံးချင်းထုတ်မှာ ညီမလို့တော့ မထင်ပါနဲ့ :D)
စာတွေ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပါမယ်း)